Alaabtayada ugu muhiimsan waa Bolts (Hex bolts, Lag bolts, Carriage bolts, U bolts, St bolts bolts, Foundation bolts, Non-standard bolts); Boolal (Qoryo qoryo ah, boolal qalalan, mashiinno, mashiinno qodista, iyo boolal aan caadi ahayn); Nowska (Hex nuts, lowska qufulan, lowska daboolka, lowska baalasha, lock Lock iyo lowska aan caadiga ahayn); Ul dunta; Maydhayaasha (Flat Flat, Washer Spring) ； Shaft, Pins, qayb ka mid wax isdabamarinta iyo alaabooyin kale oo qalab badan ah.
Furayaasha waxaa sidoo kale loogu yeeraa qaybaha caadiga ah ee suuqa. Waxay yihiin miisaanka guud ee fasalka qaybaha makaanikada ee la isticmaalo marka laba ama in ka badan oo qaybood ah (ama qaybo ah) la isku xidho oo lagu xidho gebi ahaanba. Astaamihiisu waa in isku xidhayaasha noocyada iyo qeexitaanadu ay yihiin qaybaha aasaasiga ah ee farsamooyinka badankoodna la isticmaalo isla markaana baahi weyn loo qabo.
Xargaha Fududeeyeyaasha waxaa sidoo kale loogu yeeraa qaybaha caadiga ah ee suuqa. Waa eray guud oo ah nooc ka mid ah qaybaha makaanikada ee la isticmaalo marka laba ama in ka badan ama qaybood ama qaybo ka kooban la isku xidho oo lagu xidho gebi ahaanba. Waxaa lagu gartaa noocyo kala duwan oo qeexitaanno ah, waxqabadyo iyo adeegsiyo, iyo heer sare oo jaangoyn ah, taxane ah iyo guud ahaanba. Firayaasha ayaa ah qaybaha aasaasiga ah ee farsamada loo isticmaalo baahidooda aadka u weyn.
Dhejiyeyaasha waa nooc ka mid ah qaybaha farsamada ee loo isticmaalo isku xirka isku xirnaanta oo si aad ah loo isticmaalo. Dhammaan noocyada wax lagu dhejiyo ayaa lagu arki karaa mashiinno kala duwan, qalab, gaadiid, maraakiib, jidadka tareennada, buundooyinka, dhismayaasha, qaababka, qalabka, qalabka, mitirrada iyo sahayda. Waxaa lagu gartaa noocyo kala duwan oo qeexitaanno ah, waxqabadyo iyo adeegsiyo, iyo heerka jaangoynta, taxadarka, iyo guud ahaaneedba sidoo kale aad iyo aad u sarreeya. Sidaa darteed, dadka qaarkiis waxay ugu yeeraan nooc ka mid ah xirayaasha oo leh heerar qaran sida isku xirayaal halbeeg ama si fudud u ah qaybo heerkoodu sarreeyo.
Xargaha ayaa ah qaybaha aasaasiga ah ee farsamada loo isticmaalo. Markii ku soo biirista waddankayga WTO 2001, waxay gashay safka waddamada waaweyn ee ganacsiga caalamiga ah. badeecadaha waddankeyga lagu dhoofiyo waxaa loo dhoofiyaa dalal kala duwan oo adduunka ah, badeecadaha wax lagu xirayo ee adduunka oo idilna iyaguna waxay ku sii qulqulayaan suuqa Shiinaha. Xargaha, oo ah mid ka mid ah wax soo saarka leh baaxad weyn oo wax dhoofinta iyo dhoofinta dalkayga ah, waxay leeyihiin muhiimad weyn iyo muhiimad istiraatiiji ah oo loogu talagalay dhiirrigelinta shirkadaha xiraha Shiinaha si ay u noqdaan kuwo caalami ah iyo dhiirrigelinta shirkadaha dhejiska si ay si buuxda uga qaybqaataan iskaashiga caalamiga ah iyo tartanka. Maaddaama qeexitaannada, cabirrada, dulqaadka, culeyska, waxqabadka, xaaladaha dusha sare, hababka calaamadeynta, kormeerka aqbalaadda, calaamadeynta iyo baakadeynta badeecad kasta oo xirxirayaal gaar ah lagu qeexay dhowr heerar ee warshadaha qaran, sida heerka Ingiriiska, heerka Jarmalka iyo heerka Mareykanka.
Hore: Sicir-dhimis Weyn Shiinaha Qashin Weyn Skip Bag Qashinka Dib-u-warshadaynta Jumbo Washout Beer Qashinka Baaxadda Weyn ee Boorsooyinka Dambiisha Dhismaha
Xiga: Warshad si toos ah Shiinaha Nooca Qalalan Nooc Balaaran oo Fashilan Mashiinka Digaaga Cagaaran Pea Mashiinka Xiirashada Digirta / 300-400kg / H Cocoa Maqaarka maqaarka Timaha
Gawaarida Gawaarida, U Bolts, Hex handarraabbadeedii, Lag Bolts, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, Qaab dhismeedka,